मसिंर २८ इलाम
कर्फोक बिद्या मन्दीरमा बिद्यार्थीको कपि जाचँ गर्दै मेयर राई​​
सूर्योदयनगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्र्दै नगरपालिका भित्रका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउँने अधिकार सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले सामुदायिक बिद्यालयको अनुगमनलाई तिब्रता दिएको छ ।
यसको अगुवाई नगरपालिकाका प्रमुख(मेयर) रण बहादुर राईले गरिरहनु भएको छ । उहाँ निर्वाचित भए यता नगरक्षेत्रका विभिन्न बिद्यालयहरुको अनुगमन गर्दै बिद्यालयको शैक्षिक अवस्थाबारे बुझने तथाङक संकलन लगायतका कार्यलाई तिब्रता दिइरहनु भएको छ । प्रमुख राईले सामाजिक विकास समितिका पदाधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी वडा अध्यक्ष पत्रकार लगायत समेत सहभागि गराएर बिद्यालयको अनुगमनलाई तिब्रता दिईरहनु भएको हो ।
उहाँले यसरी बिद्यालयको अनुगमन गर्न सुरु गरेपछि नियमति रुपमा उपस्थित नहुने समयभरी बिद्यालयमा नबस्ने शिक्षक शिक्षिकाको सङख्या घट्दै गएको छ । आफनो काम कर्तब्य प्रति इमान्दार शिक्षक शिक्षिकामा प्रोत्साहन मिलेको छ ।
मेयर राईको यो कदमले नगर क्षेत्रमा पछिल्लो समय निक्कै कमजोर बन्दै गएको सामुदायीक बिद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउने सकेंत देखिएको छ । कतिपय बिद्यालयमा शैक्षिक अवस्था राम्रो भए पनि धेरै सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसले सामुदायिक बिद्यालय प्रति अभिभावकको आर्कषण घट्न थालेको छ ।
सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न नसके बिपन्न अवस्थामा रहेका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट बन्चित हुने देखिन्छ । नगरप्रमुख राई सहित नगरपालिकाको अगुवाईमा बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न बिद्यालय अनुगमन बिद्यालयको गुनासा जिज्ञासा र समस्या समाधानको लागि पहल थालेपछि नगर क्षेत्रका अभिभावकमा खुसी छाएको छ ।
हालै नगरप्रमुख राई सहितको टोलिले कर्फोक बिद्यामन्दीरको पनि अनुगमन गरेर त्यहाँको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ । यसैबिच मेयर राईको निर्वाचन भएपछि पहिलो ध्यान बिद्यालय तर्फ किन गयो त हामीले उहाँ सगँ यसै बिषयमा कुराकानीको केहि अशं प्रस्तुत गरेका छौँ ।
प्रस्तुती राजकुमार दहाल अभिलाषी
चुनाव लगत्तै तपाईको ध्यान बिद्यालय तर्फ गएको देखियो किन होला ?
हामी बिद्यालयमा मात्र हैन सबै क्षेत्रमा अनुगमन गरीरहेका छौँ । तीन तहको निर्वाचन भइसकेको छ । यो स्थानीय सरकार परिचालन ऐन २०७४ आईसकेको छ । यसैक्रममा बिद्यालयको गुणस्तर निक्कै कमजोर भएको छ । यसरी बिद्यालय चलाएर हाम्रा बालबालिकाको भविश्य माथि खेलवाड गर्न हुदैन । सामुदायिक बिद्यालयको अवस्था राम्रो बनाएर लानु पर्छ । यस्तो सम्वेदनशील क्षेत्र बिद्यालयको अवस्था लाई राम्रो बनाउन नसके बिद्यालयको अवस्था सुर्धान नसके हाम्रो बालबालिका जो भविश्यको कर्णधार पनि हुन उनिहरुको राम्रो बनाउन र देशको सफल नागरीक बनाउन शिक्षा सुधार गर्न जरुरी छ ।
तर म सबै त भन्दिन किनकी केहि बिद्यालयमा शैक्षिक अवस्था राम्रो छ । मेहनती शिक्षक शिक्षिका हरु पनि हुनुहुन्छ । तर धेरै बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था डामाडोल छ सामुदायिक बिद्यालय प्रति अविभावकको आर्कषण घटदो छ । यसरी हाम्रा बिद्यालय चल्न सकिन्दैन सामुदायिक बिद्यालयलाई राम्रो र व्यवस्थीत बनाएर लानु पर्छ । सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ यस बारेमा हामी अध्ययन गरीरहेका छौँ । यसको कारणबारे अध्ययन जारी छ । सूर्योदयनगरपालिकामा मात्रै १५ करोड भन्दा बढि बार्षिक सामुदायिक बिद्यालयमा खर्च हुन्छ ।राज्यले यतिका धेरै खर्च गर्ने निकायबाट समाजले पनि ठुलो अपेक्षा राखेको हुन्छ । अब हाम्रो शिक्षा स्वास्थय सबै क्षेत्रमा पहिलो अनुगमन हुन्छ । अब हामी दह्रो सगँ लाग्छौँ हामी रोकिदैनौँ अघि बढीसकेका छौँ । आज पनि हामी कर्फोक मा गयौँ धेरैको आशाको केन्द्र सो बिद्यालयलाई कसरी सफलताका साथ अघि बढाउन सकिन्छ भनेर नै हामी गएका हौँ ।
तपाईले यसरी बिद्यालयको अनुगमन थाल्दैमा बिद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउला त ?
यो अनुगमनको क्रम रोकिने वाला छैन । हामी नगरका सामुदायिक बिद्यालयहरुमा जुनसुकै समयमा पुग्न सक्छौँ । बिद्यालयको अवस्था शैक्षिक अवस्था शिक्षक शिक्षिकाको अवस्था सबै हेरिरहन्छौँ ।
मैले सामाजिक बिकास समिति बनाईसकेको छु सो समितिमा अनुभवि ब्यत्तिहरु हुनुहुन्छ । मैले नभ्याएमा उहाँहरुले अनुगमन गर्नु हुन्छ । अनुगमनमा तपाई जस्ता पत्रकार पनि सहभागी भईरहनु भएको छ । आज पनि तपाई हामी सगँ हुनुहुन्थ्यो । तपाईलाई पनि थाहा छ हाम्रो अनुगमन र हाम्रा उद्देश्यबारे हामी वडालाई एकदम सचेत बनाउछौँ । नगर शिक्षा नियमावली अब १५ दिन भित्रमा बनाउछौँ । शिक्षा नियमावली बनेपछि अझ मजाले लाग्छौँ हामीलाई जनताको अभिभावकको सहयोग चाहिएको छ ।
सबै अविभावक जनता नगरबासीले साथ दिएमा शिक्षामा हामी धेरै विकास गर्न सक्छौँ । यो रातरात हैन केहि समय लाग्छ तर शिक्षामा सुधार आउछ ।
सूर्योदयनगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?
सबै बिद्यालय म भन्दीन धेरै शिक्षकहरु राम्रा हुनुहुन्छ अनुभवी हुनुहुन्छ राम्रा हुनुहुन्छ उहाँहरुले मेहनत गरीरहनु भएको छ तर केहि शिक्षक शिक्षिकाको कारणले बिद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुदै गएको छ । बिद्यालयमा पुग्दा दरबन्दी जति छ त्यसको तुलनामा कम शिक्षक शिक्षिका उपस्थित भएको पनि पाईन्छ । यसबारे प्रधानाध्यापकलाई प्रश्न गर्दा कोहि बिदामा बसेको कोहि केहि पिरियड पढाएर फर्किनु भयो । भन्ने कुरा आउछ । हो म मान्छु कहिलेकाहि बिदामा बस्नु पर्छ तर अब यसरी चल्दैन अब हरेक शिक्षकले समयअवधिभरी कक्षा कोठामा बस्नै पर्छ पढाउनै पर्छ शिक्षक शिक्षिकाको पहिलो काम बिद्यालयमा पढाउने हो राज्यले उहाँहरुलाई त्यसकै लागि सेवा सुविधा दिएको हो । अब विद्यालय समयमा शिक्षक शिक्षिकाले समय अवधीभरी बसेर बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था बिद्यार्थीको शिक्षाको अवस्था बारे गभिंररुपमा लाग्नु पर्छ ।
बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न लाग्नु पर्छ त्यसको लागि नगरपालिकाले के गर्न सक्छ हामी गर्छाँै । तर अब शिक्षिक शिक्षिका पनि आफनो काम प्रति गभिंर हुनु पर्छ । हामी लागि सकेका छौँ हामी गरी छाड्छौँ ।
तपाईले अनुगमन गर्दैमा शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउँला त ?
शिक्षा नियामावलि पन्ध्र दिन भित्र आउँछ । शिक्षक शिक्षिका बिद्यालय समयमा बिद्यालमा हुनै पर्छ यदि उहाँहरुले पेशागत मर्यादा भित्र बस्नु भएन भने हामी स्पष्टीकरण सोध्छौँ । हामीले सहि जवाफ पाउन सकेनाँै भने जनतामाझ जान्छौँ । अभिभावक सगँ छलफल गर्छौँ उहाँलाई के गर्न सक्छौ थप तालिमहरु दिएर हुन्छ की अन्त कतै पठाएर हुन्छ की के गर्दा हुन्छ गर्छौँ कुनै स्थानमा स्थानान्तरण गरेर हुन्छकी जिल्ला शिक्षा कार्यलय सगँ समन्वय गरेर हुन्छ की अब शिक्षामा सुधार ल्याउन कुनै पनि प्रकारको चुनौति हरुको सामना गर्न जुध्न लडन सूर्योदयनगरपालिका तयार छ । यो कदम मैले बिल्कुल निश्वार्थ भावले सुरु गरेका हो ।
तपाई मेयरमा निर्वाचित भएपछि बिद्यालय अनुगमनमा बढि जोड दिदै हुनुहुन्छ नि किन ?
शिक्षा छैन भने विकास हुदैन नगरको समृद्धिको दरिलो खम्बा नै शिक्षा हो । जबसम्म हामी शिक्षित समाज निमार्ण गर्न सक्दैनाँै तब सम्म हामी केहि पनि गर्न सक्दैनौँ । फेरी मेरो धारणा के छ भने हाम्रा नगरका बालबालकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु पर्छ यो हाम्रा बालबालिका हक अधिकार पनि हो । हामी समृद्ध नगर बनाउन लागिरहेका छौँ । यसको पहिलो आधार त शिक्षा नै हो त्यसैले पनि म नगरका बालबालिकालाई राम्रो प्रभावकारी शिक्षा दिन चाहान्छु । सबैभन्दा पहिला हाम्रा बिद्यालयको अवस्था कस्तो छ भएका जनशत्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ कि सकिदैन हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरु कतिको खट्नु हुदैछ भन्ने बारेमा पनि बुझौँ उहाँहरुको समेत साथ सहयोगमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि जुटौँ भनेर हामी बिद्यालय तर्फ पुगिरहेका छौँ र यो कार्य जारी रहन्छ ।
तपाईको ध्यान अहिले शिक्षामा मात्र हो कि अरु तिर पनि छ ?
शिक्षामा मात्र हैन सरसफाईमा हामी त्यतिकै लागि रहेका छौँ नगरलाई प्लास्टीक मुत्त क्षेत्र घोषणा गरेर अगाडी बढीसकेका छौँ यसको कार्यन्वयनको चरणमा छौँ । हाम्रो विकासको आधार पर्यटन क्षेत्र , पानीको स्रोत संरक्षणको लागि योजनाबद्ध रुपमा लागेका छौँ ।
विकासका आधारहरु खोजिरहेका छौँ विकासका आगि आधारभुत आवश्यकता के के रहेछन हामीलाई दिईएका अधिकारहरु कसरी प्रयोग गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने बारेमा पनि हामी सचेत भईसकेका छौँ । नगरको सम्भावना समस्या लगायतको बारेमा हामी अध्ययन गरीरहेका छौँ ।
अब नगरमा विकास हुन्छ हुन्छ हेर्नुस हामीले विकासका क्लु भेटि सकेका छौँ । तीनै तहका निर्वाचन पनि सकिएको छ अब अझ हामी अधिकार सम्पन्न हुदैछौँ हामी हाम्रा कर्तब्य अधिकार जिम्मेवारी लाई अक्षरशः पालना गर्दै हामी जनताको साथमा विकासमा लाग्छौँ ।
म १० देखि ५ बजे सम्म मात्र हैन दिन रात नभनि खटिरहेको छु । नगरका अरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि त्यसै अनुसार अगि बढन भनेको छु र उहाँहरु प्नि अतिनै सक्रियरुपमा खटिरहनु भएको छ । हामी सबै नगरपालिका टिम कति घण्टा खट्नु पर्छ हामी तयार छौँ । अब हामीलाई यसै अनुसार जनताको साथ पनि चाहिएको छ ।
अनि तपाई अनुगमनमा गएको बेला शिक्षक शिक्षिका को भनाई के छ त ?
उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ अब केहिलाई त पिर पनि पर्ला तर कसलाई के पर्छ म त्यता तर्फ सोच्दीन । हेर्नुस जो १० देखि ४ बजे सम्म खटेर काम गरीरहनु भएको छ उहाँहरुले आशु समेत झार्नु हुन्छ र भन्नुहुन्छ तपाईहरुले यसरी नियमित अनुगमन गर्नु पर्छ तब मात्रै शिक्षामा सुधार आउछ । जो खटेर पढाउनु हुन्छ उहाँहरुलाई चिन्ता छ तर केहि बिद्यालयमा भन्दा पनि अरुमा ध्यान दिनु हुन्छ उहाँहरुलाई हामी आफनो कर्तब्य सम्झाउछौँ र शिक्षामा सुधार गरिछाड्छौँ ।
यसबेला नगरक्षेत्रका प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिका हरुलाई स्थानीय सरकार प्रमुखको तर्फबाट के भन्नु हुन्छ ?
हामी सधै तपाईहरुको साथमा छौँ हामी हातेमालो गरेर अघि बढौँ बिद्यामन्दीर लाई माया गरौँ ब्यत्तिगत रुचि भन्दा पनि समाजको हितमा अगि बढौँ । हाम्रो सामुदायिक बिद्यालयलाई सफल बनाउन के गर्नु पर्छ आउनुस छलफल गरौँ म यहि आवहान गर्दै नगरपालिका सधै तपाईहरुको साथमा रहन्छ तर फेरी पनि बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर प्रति कसैले खेलबाड गरेर जान्छ भने हामी चुपलागेर भने बस्नेवाला भने छैनौँ । साथै निजि बिद्यालयहरुको लागि पनि नगरले सधै साथ सहयोग गर्ने कार्यलाई कति पनि कन्जुस गर्ने छैन हामी तपाईहरुकै साथमा छौँ ।
बाकी बिषयहरुमा अर्को भेटमा बहस गरौला अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ ?
हाम्रो टिम निर्वाचित भएर आए देखिनै हामी सक्रिय रुपमा खटिरहेका छौँ मेहनत गरीरहेका छौँ हामी नगरलाई एम समृद्ध नगर बनाउने अभियानमा निरन्तर लाग्ने छौँ साथै अव २ हप्ता पछि बाट रेडियो फिक्कलबाट हेल्लो सूर्योदय कार्यक्रम प्रसारण हुदैछ त्यो कार्यक्रममा तपाईले आफ्ना गुनासा जिज्ञासा चासो सुझाव सबै राख्न सक्नु हुन्छ र नगरपालिकाको सबै सुचना पाउनु हुनेछ यो खुसीको कुरा पनि म तपाईमार्फत नगरबासीमा जानकारी गराउछु । समय दिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद ।